ग्रह मा तेज जनावर: एक दर्जन नेता
यो विश्वास गर्न गाह्रो छ, तर त्यहाँ एक इन्जिन ले साइकिल, एक गाडी वा एक कार तुलना गति सक्षम छन् कि जनावर हो। वास्तवमा, यस्तो Fauna छैन त सानो छ। यस लेखमा हामी ग्रह मा के तेज पशु बाहिर पाउनुहुनेछ, र गति मा शीर्ष दस निर्धारण। हाम्रो शीर्ष 10 उल्टो क्रममा विचार गर्नुहोस्।
10 सूची ब्यासों बन्द गर्छ। यो जनावर गर्न 70 मी / घन्टा अप विकास गर्न सक्षम छ र यो पहाड, फाँटमा, मरुभूमिमा, र अन्य ठाउँमा पाउन सकिन्छ जो जडानमा, विभिन्न अवस्थामा भिज्न सक्षम छ। खाना लागि को रूप मा, coyotes newts देखि लगभग सबै र hares संग समाप्त प्रयोग गर्नुहोस्। तिनीहरूले carrion घृणा छैन।
9 ग्रे फक्स अप 71 मी / घन्टा र "ग्रह मा तेज जनावर," नवौं स्थानमा स्थित को मूल्यांकन गर्न गति मा चल्छ। त्यो परिवार Canidae एक प्रतिनिधि हो। रातो स्याल संग तुलना धेरै rarer छ। जनावर को एक रोचक सुविधा रूखहरू हाँगाहरू लैजान आफ्नो क्षमता छ।
8 अभ्यास मा, तेज जनावर - यो सधैं शिकार फसाउन आवश्यकता शिकारीहरु छ। को एल्क अधिकतम गति यसलाई सजिलै थप बिस्तारै धेरै सार्न भनेर भालू र ब्वाँसा टाढा चलाउन अनुमति 73 मी / घन्टा छ। जनावर सधैं एक बथान वातावरण बसोबास।
7 केप शिकार कुकुर गर्न 74 मी / घन्टा accelerates पनि नाम अन्तर्गत ज्ञात छ "अफ्रिकी जंगली कुकुर।" यो केवल अफ्रिकी महादेशमा मा, दुवै Savannah र वुडल्याण्ड पाउन सकिन्छ। जनावर बरु दुर्लभ छ र पैक मा hunts। यस मामला मा, ब्याटिङ-eared स्याल कहिल्यै डराउनुहुन्छ र उनको हत्या अघि सिकार Chase छैन।
6 मूल्यांकन "तेज जनावर" सिंहहरूका बिना कल्पना गर्न गाह्रो छ। तिनीहरूले गर्दा महिलाहरुको पनि शिकार सिधै संलग्न छन्, इलाका को सुरक्षा मा लगे पुरुषहरु predominantly छन्। तिनीहरूले नियम, सिकार गर्न crept मात्र छोटो दूरी, आक्रमण। पकडे शिकार सिंह पहिलो शावक खान, र त्यसपछि, र केवल एक सिंहनी को अन्त मा। जनावर को 74 मी / घन्टा गति पुग्न सक्दैन भन्ने तथ्यलाई बावजुद, धीरज तिनीहरूले मात्र छोटो दूरीको लागि पर्याप्त छ।
5 पाँचौं स्थानमा घोडा चढेर छ। यसको अधिकतम गति 75 किमी / घन्टा छ।
4 ग्रह मा तेज जनावर आवश्यक एक प्लास्टिक शरीर र भद्र सेटिङहरू छैन। एक हडताली पुष्टि wildebeest छन् जो, ठूलो हुनुको ungulates गर्न 88 मी / घन्टा बढाउने सक्षम। तिनीहरूले निरन्तर स्थानान्तरण र वर्षको लागि अप गर्न 1600 किलोमिटर दूरी कवर सक्छ।
3. Pronghorn सबैभन्दा शिकारीहरु टाढा, तोड्न पनि आधा आफ्नो क्षमता speeding सक्षम। 88,5 मी / घन्टा - यसको औसत गति मा वरिपरि 60 कि .मी / घन्टा र रेकर्ड रेकर्ड हो।
2. दोस्रो स्थानमा हरिण प्रजाति मध्ये एक प्रतिनिधित्व springbok राखिएको स्तर। पशु अफ्रीका मा मुख्य रूप बसोबास। आफ्नो क्षमता को hallmarks एक3मीटर को एक उचाइ सम्म सरल क्षमता छ। यसको गति सन्दर्भमा, यो 90 मी / घन्टा छ।
1 संसारमा तेज पशु - यो एक चितुवा छ। अन्य सदस्यहरूको तुलनामा बिरालो परिवार यो 70 140 देखि किलो को एक भद्र वजन छ। यो predator यसरी दोस्रो प्रत्येक चौथाई लागि 9-मीटर कदम बनाउने, गर्न 120 मी / घन्टा बढाउने गर्न सक्नुहुन्छ। यी जात को दूरी सन्दर्भमा, यो 300 मिटर पुग्यो। खाद्य उहाँले अग्लो घाँस वा नजिकै रूखहरू मा विशेष प्रयोग गर्दछ, त्यसैले तिनले अन्य बिरालो देख्न सकिएन। यसलाई उल्लेख गर्नुपर्छ यस्तो विकास गर्न सक्षम रहेको छ, गति guepard यो पातलो हड्डी, साथै साना चिबुक र दाँत छ किनभने, सिंह र बाघ कमजोर।
हाम्रो नदी मा माछा mutants
रूस र नयाँ को संभावनाहरु मा पुरानो तेल क्षेत्र
बर्ड Trumpeter: जीवन शैली र atypical सामाजिक संगठन
को Fed भैंसिहरु? Bialowieza भैंसिहरु: तस्बिर, वर्णन
एक कठफोडवा आकर्षित गर्ने बारे सुझावहरू
कसरी रोल "क्यालिफोर्निया" घरमा तयार?
छेद मा आलु संग ओवन मा चिकन: एक स्वादिष्ट खाने को रहस्य
सुट आफ्नै हातले "वाइकिंग": रचनात्मक विचार, काम विवरण
एक आश्चर्य संग पकौडी: भरने र नुस्खा को मूल्य। कुनै पनि अवसरको लागि एक आश्चर्य संग पकौडी
किन म काम मा इन्टरनेट चाहिन्छ? तपाईं एक छिटो इन्टरनेट जडान किन चाहिन्छ?